News Collection: सागपातले दीर्घायु
के ९० वर्षको उमेरमा कसैले मृत्युलाई परास्त गर्न सक्छ ? ३० वर्षको उमेरदेखि नै तपाईं ढुंगे (पाषाण) युगको जस्तै खाना खाने गर्नुभएको छ भने यो सम्भव हुन्छ ।
जीव विज्ञानी प्रा. माइकल रोजका अनुसार अन्न र दुग्ध उत्पादनको सट्टा समुद्री भोजन, फलफूल, ड्राइप|mुट्स र सागसब्जी बढी खानाले तपाईंको उमेरमा ब्रेक लाग्न सक्दैन । यस्तो पदार्थ पाषाण युगमा हाम्रा पूर्वजहरू खाने गर्थे । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत गर्ने रोजले यही कारण गहुँ, चामल जस्ता अन्न र दुग्ध उत्पादन खान छोडेका छन् । उनका अनुसार यस्ता अन्नको शरीरमा राम्रो प्रभाव दीर्घकालिक रूपले पर्दैन । रोजको यो खोज मानिसको जीवनकाल बढाउन सहयोगी हुने विश्वास गरिएको छ ।
तर केही वैज्ञानिकले रोजको खोजमा प्रश्न उठाएका छन् । रोजले बुढ्यौली हुनुको कारणबारे केही नबताएको उनीहरूको जिकिर छ । न्यु क्यासल विश्वविद्यालयको इन्स्िटच्युट अफ एजिङ एन्ड हेल्थका प्रा. टाम किर्क उड ठोकुवा गर्छन्, 'जीवनको अन्तिम समयमा बुढ्यौलीलाई वशमा राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा भ्रामक छ ।'
जनसांख्यिक तथ्यांकहरूका अनुसार बढ्दो उमेर सामान्यतया ९३ वर्ष पुगेपछि स्थिर हुन्छ । ९९ वर्ष पुगेपछि ९३ वर्षका व्यक्तिको तुलनामा मृत्युको सम्भावना कम हुन्छ । प्रा. रोज भन्छन्, 'यो कुरा सुन्दा अवश्य अस्वाभाविक लाग्छ, तर यसको सम्बन्ध समयसँगै परिवर्तन हुने हाम्रो आनुवांशिक संरचनासँग छ ।'